Waa Adinka Waxa ku Kalifay In ay Sidaan Sameeyso!!!! | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Waa Adinka Waxa ku Kalifay In ay Sidaan Sameeyso!!!!
Waa Adinka Waxa ku Kalifay In ay Sidaan Sameeyso!!!!
Bulsha:- Waxaa caado u noqotay dumarkii soomaaliyeed badan kooda inay meherad ka dhigteen sidii ay u badali lahaayeen midabka jidhkooda, soomaalida oo kamida dadka midabka furan ee daga qaarada Afrika ayaa isoogu jira kuwo midab madow, kuwo midab maariin ah leh iyo kuwo u midab kooda lagu tiriyo inuu yahay cadaan. Gabadha midabka cad ee soomaaliyeed waxay isu haysataa inay ka qurux badan tahay mida kale, arintaasina maaha waxa ay iyadu kaligeed iska dhaadhicisay.
Tusaale gabadha la rabo in la tilmaamo quruxdeeda waxaa loogu yeedhaa cadayeey. Taasoo looga jeedo qurux badaneey, cadaan jacayl heerka ay ka gaadheen dadka qaar waxay gaadheen in magaalooyinka qaar loogu yeedho magaalo cadeey, sida xamar cadeey iwm. Magaalo maxay ka taqaanaa cadaan.
Hadaba hadii aan usoo noqdo madwuudac maqaalkan oo ah in nimanka soomaaliyeed ay jecel yihiin gabadh midab cad inay guursadaan, waa arin muuqata oo cad marba hadii amaan looga dhigay gabadha cadaankeeda. Niman badan waxay ku riyoodaan sidii ay u heli lahaayeen ugu yaraan gabadh midabkeedu furan yahay.
Waxaa laga yaabaa in dadbadni ay yidhaahdaan waxaba kama jiro sheekadan, arin inaad aad usii eegto u baahanba maaha. Gabadha soomaaliyeed wax ay kaligeed iska fikirtay maaha oo ay iska dhaadhicisay si muuqata iyo si qarsoonba waxaa looga dhaadhiciyey in badan oo dumarka kamida in gabdha midabka furani ay ka qurux badan tahay tan midabka madow.
Niman badani waxay u arkaan gabadha midabka cad lihi inay ka kibir badan tahay mida kale sababtoo ah, hadii ay marba midab cad leedahay qurux kama maqna.
Waxaa hubaal aan la inkiri karin ah in nimanku guud ahaan ay wada rabaan gabadh midab furan, taasina waa mida raadka wayn ku reebtay nafsiyadii gabadha soomaaliyeed. Dumarka qaar waxay gaadheen inay wajigooda ku maydhaan nooc kasta oo kiimiko ah oo u daran jidhkeeda iyo nafteedaba.
Waxa ugu wayn ee ku kalifayaana waa qaabka ay u eegayaan gabdha midabka furan bulshadu guud ahaan iyo khaasatan in kamida nimanku. Ictiraafka (recognition) ay ka hesho bulshadu waxay ku reebtay raad wayn nafsiyadeedii sidaa darteed waxay isku mashquulisay sidii ay u heli lahayd quruxdaa la sheegayo.